Man Utd oo u gacan haadinaysa Radja Nainggolan – Gool FM
(Manchester) 27 jUUNYO 2017 – Waxaa lasoo werinayaa in Manchester United ay aad u doon doonayso laacibka Radja Nainggolan oo ay adeeggiisa u quurayso adduun dhan €45m.
Laacibkan Belgian-ka ah ayay ka go’an tahay inuu sii joogo kooxda Giallorossi, balse ilaa haatan ma jiro war kasoo kordhay qandaraas kordhinta laacibka, iyadoo ay xaajadu ku istaagtay laacibka oo dalbanaya €4m iyo bareemiyo iyo Roma oo ogol €4m oo ay bareemiyadu ku jirto.
Naadiga Lupi ayaan ku khasbanayn in ay laacibka u iibiso hannaanka dhaqaale wanaagga ee Financial Fair Play darteed, maaddaama ay iibiyeen Mohamed Salah oo ku biiray Liverpool, halka Kostas Manolas iyo Leandro Paredes ay laftoodu Ruushka u socdaan.
Yeelkeede, Nainggolan oo haatan 29 jir ah ayaan hadda kaddib lacag badan lagu heli doonin iyadoo uu warsiduhu sheegayo in Jose Mourinho oo bishii tagtay laacibka usoo cid diray uu la diyaar yahay €40-€45m iyo €7.5m oo uu fasalkii mushahar ahaan u siinayo.
Maareeyaha Giallorossi ee Monchi ayay dhici kartaa inuu laacibka iibiyo si uu u dhiso koox da’yar, taasoo ah arrin uu khibrad u leeyahay.